Rwanda na-anabata ndị gbara ọsọ ndụ Libya na ókèala ya: ọ bụ kemgbe abalị ụnyaahụ (Tọzdee 26 Septemba 2019), na ìgwè mbụ nke ndị gbara ọsọ ndụ Libya gafere ala Rwandan "Rwanda kwere nkwa ịnabata ha" Otu na-agbaba ebe mgbaba. n'ihe anyị na-amaghị; anyị zobe onwe anyị n’ihe anyị mara; amaghi ihe bu olile anya
Site na: KongoLisolona: Septemba 28, 2019 00: 45 Enweghị asịsa
Ọ bụ atụmatụ dị mma n'akụkụ nke Rwanda ịnabata ndị gbara ọsọ ndụ Ojii / Africa n’ókèala ya, ọkachasị ndị gbara ọsọ ndụ na ndị njem nọ na Libya. Nke a bụ akụkụ nke nkwado akụkọ ifo Black / African. Ihe zuru oke iji kelee Rwanda.
Agbanyeghị, ekwesighi ime ya, bụ osisi na-ezochi oke ọhịa. N'ihi na, n'inye obere mpaghara mba Rwandan, otu ihe ijuanya ebe oghere dị na Rwanda nwere ike ịnwe ndị niile gbara ọsọ ndụ?
Na mgbakwunye, Rwanda egosiworị ọchịchọ ịnabata ndị a Falasha (Ndị Juu ojii) Izrel. N'agbanyeghị nke ahụ, a ka nwere ọtụtụ puku ndị gbara ọsọ ndụ Rwandan (Hutu n'ihi na la akụkụ ọzọ na agbata obi Congo na Rwanda na-adọga ịnabata. Akuko nke 1994 ekwenyeghi imeghachi onwe ya.
Taa, Democratic Republic of Congo na-akwụ ụgwọ dị egwu nke ọnwụ karịrị nde 6. A ka na-ebiwanye ndụ na ọwụwa anyanwụ nke mba a site na mgbagwoju anya nke a na-akpọ International Community. Kedu ihe dị mma na Rwanda nwere ike ịnabata mmadụ niile mgbe nke a ga-eweta nhụsianya ọdịnihu maka mba ndị ọzọ na Mpaghara ?? O nweghị ihe zoro ezo n’okpuru ụwa.
Hel dị n ’ụwa, jụọ ndị gbara ọsọ ndụ. “E nwere oge mgbe ihe bụ eziokwu jọgburu onwe ya nke na uche na-agbaba na dementia. "
Ilu: nke Steve Lambert & Abdoulaye Junior Maiga dere